Etu esi azụ ahịa Forex maka ndị mbido - February 2021 PROFIT Guide! - Mụọ ahia 2
Trazụ ahịa Forex maka mmalite: Otu esi azụ ahịa Forex ma chọta Nzube Kachasị Mma 2021
Na-achọ ịmalite ịzụ ahịa azụmaahịa n'ịntanetị, mana ịmaghị nke ọma ebe ị ga-amalite? Ọfọn, ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị, ebe anyị ga-egosi gị ihe niile ịchọrọ ịma iji mee ka ọrụ azụmaahịa gị na ụkwụ aka nri.
Industrylọ ọrụ ahụ n'onwe ya na-ahụ ọtụtụ ijeri na paụnd ọnụ ahịa ego na-agbanwe aka kwa ụbọchị, yabụ na ị ga-esonye na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ. Echiche zuru oke bụ ị nweta uru nke mmegharị ọnụ n'etiti ego abụọ na-asọ mpi - dịka GBP na USD.
Agbanyeghị, anyị ga-atụ aro ka ịgụrụ onye ndu anyị Trazụ ahịa Forex maka ndị mbido: Otu esi azụ ahịa Forex ma chọta usoro kacha mma tupu ịmalite. Ọ bụghị naanị na anyị ga-enye gị ins na outs of how Forex na-arụ ọrụ, mana anyị ga-edekwa ihe kacha mma 3 azụmaahịa azụmaahịa maka 2021.
Mara: Learningmụta otu esi amata ohere azụmaahịa na oghere oghere abụghị ihe dị mfe. Nke a bụ ihe kpatara ị ga - eji mụta otu esi azụ ahịa nke ọma tupu itinye ego nke onwe gị n'ihe egwu.
Kedu ihe bụ uru na ọghọm nke azụmaahịa Forex?
Uru site na mmegharị ọnụahịa nke ego na-asọmpi
Otu n'ime ahịa ahịa mmiri mmiri zuru ụwa ọnụ
Ihe karịrị 100 + ego abụọ maka ahia
Ndị na-ere ahịa Forex na-akwado usoro ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị
Ahịa ahịa na-arụ ọrụ na 24/7
Inwe ike irite uru na-agbanwe agbanwe adịghị mfe
Kedu ihe bụ Forex Trading?
Forex - a na-akpọkwa 'FX', na-anọchi anya mgbanwe mba ọzọ. Na ụdị ya kachasị mkpa, Forex trading bụ usoro gbanwere otu ego na nke ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị gbanwere GBP maka EUR, nke a ga-anọchite anya ahia azụmaahịa. Site na nke a, azụmaahịa azụmaahịa bụ otu n'ime azụmaahịa azụmaahịa kachasị mmiri na ụwa.
N'ezie, nnukwu ụlọ akụ na-azụ ahịa ọtụtụ puku ijeri na-akwụ ụgwọ ego kwa ụbọchị. Nke a bụ otu n'ime isi ihe kpatara na oghere ihu ahụ abanyela na mkpọsa ụbọchị trading mpaghara. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ ga - ekwe omume ugbu a ịzụta, ree, na azụmaahịa ọtụtụ ego site na nkasi obi nke ụlọ gị, ọbụnakwa site na ekwentị.
Ebumnuche nke ahia Forex bụ na ị na-atụgharị uche ma uru otu ego ga-arịgo ma ọ bụ gbadata ọzọ. FX trading na-adabere na ego 'ụzọ', nke ga-agụnye ego abụọ na-asọ mpi. Dịka ọmụmaatụ, GBP / USD ga-ahụ ndị ahịa na-atụgharị uche na paụnd sterling na dollar US, na EUR / CHF ga-abụ euro na Switzerland franc.
N'ihe banyere ị nweta uru, ị ga-ekwupụta ụzọ ụzọ ahịa ga-esi aga, wee kpebie etu ịchọrọ itinye ego. A na-enye ụfọdụ ndị na-ere ahịa azụmaahịa naanị maka ndị ahịa ọhụụ, yabụ ị nwere ike ịmalite na azụmaahịa nke naanị pound ole na ole. Nke a bụ ụzọ kachasị mma iji mụta ins na outs of trading Forex na-enweghị ihe egwu nnukwu ego.
Olee otú ahia Forex?
Dị nnọọ ka klaasị ọ bụla ọzọ na-arụsi ọrụ ike na ebe nrụọrụ weebụ na-etinye ego n'ịntanetị, echiche dị oke mkpa nke azụmaahịa Forex bụ ịkpata ego. Dịka, ịkwesịrị ịhọrọ ụzọ ego ị na-azụ nke ọma, wee kpebie ụzọ ị chere na ahịa ga-aga.
Tupu ị nwee ike ịzụ ahịa, ọ dị mkpa ka ị ghọta ihe otu ụzọ ego na-adịkarị. Airszọ abụọ ga-enwe ego abụọ, ọnụ ahịa nke ụzọ ahụ na-adabere na ọnụego mgbanwe oge.
Mara: Ọ bụrụ n’echiche na ego aka ekpe nke otu ụzọ ga-abawanye na uru, ịkwesịrị itinye iwu ‘zụrụ’. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ na ego ziri ezi ga-abawanye, ịkwesịrị ịtọ 'ree' iwu.
Trakpụrụ Forex Trading Ihe Nlereanya 1: Zụrụ Iwu na GBP / USD
Iji kpochapụ alụlụ ahụ, ka anyị kwuo na ị kpebiri ịzụ GBP / USD. Na ụwa nke Forex, a maara ụzọ ụzọ ego a 'The USB'. Mgbe ị na-amụ chaatị dị iche iche maka ụbọchị na njedebe, ị kwenyesiri ike na GBP na-aga imebi nsogbu, nke pụtara na ahịa ndị ahụ kwenyere na ọ ga-abawanye na ọnụahịa megide USD.
Nke a bụ otu ahia gị ga-esi rụọ ọrụ.
GBP / USD dị ugbu a na 1.40.
Nke a pụtara na maka every 1 ọ bụla, ị ga-enweta $ 1.40.
Dịka ị chere na GBP ga-abawanye na ọnụego megide USD, ịkwesịrị itinye iwu ịzụta.
Nke a bụ n'ihi na GBP dị n'akụkụ aka ekpe nke ụzọ ahụ.
I kpebiri itinye osisi £ 500.
Oge awa abụọ ka itinye iwu gị, GBP / USD bara uru ugbu a na 1.50.
Dịka ị zụtara ụzọ ahụ mgbe ọnụahịa ya dị na 1.40, nke a na-anọchite uru nke 7.14%.
Yabụ, azụmaahịa gị £ 500 mere £ 35.70 na uru.
Mara: Dịka ị si hụ site na ihe atụ dị n'elu, ị nwetara uru n'ihi na [A] ị tinyere iwu ịzụta na 1.40 ma [B] GBP / USD mụbara ruo 1.50.
Trazụ ahịa Forex Ihe Nlereanya 2: Ree Order na GBP / USD
Iji mee ka ihe dị mfe, ka anyị jidesie otu ihe atụ na GBP / USD. Naanị oge a, anyị ga-etinye iwu 'ree' ya. N'ihi gịnị? N'ihi na anyị chere na ọnụahịa nke USD ga-abawanye megide GBP. Nke a bụ ebe ihe na-agbagwoju anya.
Ọ bụ ezie na anyị na-atụgharị uche na USD ga- dịkwuo, anyị chọrọ ọnụego mgbanwe iji gaa ala. Nke a bụ n'ihi na USD dị n'akụkụ aka nri nke ụzọ, nke pụtara na ọnụego mgbanwe dabere na dollar, ọ bụghị pound.
Na nke ahụ kwuru, ka anyị lelee ngwa ngwa nke otu GBP / USD si ere ahịa ga-adị ka.
Dika anyi kwenyere na USD ga abawanye na onu ahia, anyi choro ka GBP daa.
Nke a pụtara na anyị na-etinye a na-ere iji.
Ọzọkwa, anyị na-etinye £ 500 na ahia.
Mgbe e mesịrị na ụbọchị ahụ, GBP / USD na-agbada na 1.35.
Nke a bụ kpọmkwem ihe anyị chọrọ, dịka mbelata na mgbanwe mgbanwe pụtara na USD na-esiwanye ike megide GBP.
Obi ụtọ na uru anyị ritere, anyị kpebiri imechi ire ere anyị na uru nke 3.57%.
N’elu osisi anyị nke £ 500, anyị mere £ 17.84 na uru.
Mara: Dịka ị si hụ site na ihe atụ dị n'elu, anyị nwetara uru mgbe ọnụahịa GBP / USD dara, n'ihi na anyị debere ahịa ere.
Tradị ahia ahia Forex: Majors, Minors, na Exotics
Yabụ ugbu a ịmarala otu ụdị ịzụta na ire iji rụọ ọrụ, anyị kwesịrị ugbu a iche echiche banyere ụdị ego anyị chọrọ ịzụ. Na ụwa nke FX trading, a na-ekewa nke a ụzọ atọ - majors, umuaka, na exotics.
A maara ego kachasị azụ ahịa n'ụwa dị ka ego ndị bụ isi. Nke a gụnyere amasị GBP, EUR, USD, JPY, na CHF. Na usoro nke ụzọ onwe ya, majors ga-iso abụọ isi ego. Dịka ọmụmaatụ, GBP / USD ma ọ bụ USD / JPY.
Mazụ ahịa majors bụ nhọrọ kachasị ezi uche mgbe ị na-amalite. Nke a bụ n'ihi na ndị isi na-erite uru site n'ọtụtụ kachasị mmiri mmiri, nke n'aka nke ya na-ebute ngwa ngwa
. Echegbula onwe anyị, anyị ga-ekpuchi mgbasa ahụ n'ụzọ zuru ezu ma emesịa.
Orsmụaka pere mpe karịa mmiri. Otu akụkụ nke obere ụzọ ga-enwe nnukwu ego, akụkụ nke ọzọ ga-enwe ego na-esighi ike. Dịka ọmụmaatụ, USD / NZD ga-abụ dollar US dịka ego kachasị, na dollar New Zealand ga-anọchite anya obere ego mmiri.
Y’oburu n’inwe agụụ di elu karie ihe egwu, inwere ike ileba uzo ahia abuo anya. Ndị a nwere otu ego dị ka GBP, yana ego na-apụta dị ka Turkish Lira. Dị abụọ dị iche iche na-achọsi ike n'aka ụlọ ọrụ ego, nke pụtara na mgbasa ga-aka elu.
Ga-ahụkwa na ụzọ abụọ dị iche iche na-agbanwe agbanwe karịa ndị isi na ụmụaka. Ka odi otua, uru na ọghọm gị ga - abawanye.
Kedu ihe gbasara na Forex?
Otu n'ime okwu ndị kachasịsịsịsị na nke ejiri na mbara igwe bụ nke 'gbasaa'. Nwere ike icheta otu anyị siri nye gị ihe atụ nke usoro ịzụta na ire n'oge gara aga na ndu anyị. Mgbasa ahụ bụ naanị ọdịiche dị n'etiti ọnụahịa ịzụta na ire ere. Ọ bụrụ na ị na-eche ihe kpatara ọdịiche, nke a bụ n'ihi na ndị na-ere ahịa azụmaahịa na-enweta ego ha site na mgbasa.
N'okwu onye nkịtị, ọdịiche dị n'etiti nzụta na ire ere, ka ị na-akwụghị ụgwọ na-akwụ ụgwọ. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ọnụahịa zụta nke EUR / USD bụ 1.10, na ire ere bụ 1.11. Nke a pụtara na mgbasa ahụ ruru 0.9%.
Agbanyeghị, n'ụwa nke azụmaahịa azụmaahịa, anyị anaghị arụ ọrụ gbasara mgbasa dị ka pacenti ọ bụla na-ekwu. Kama nke ahụ, anyị na-agbakọ mgbasa na 'pips'.
Rịba ama: Pip na-anọchi anya 'pasent na isi'. Nke a bụ ego pere mpe nke otu ụzọ ego ga-esi na-aga ahịa.
Nkọwa ọnụahịa akọwapụtara dabere na akwụkwọ ego. Na nke ahụ kwuru, ụzọ ọ bụla akwụ ụgwọ na USD ga-ahụkarị 1 pip ego na $ 0.0001. Ọ bụrụ na ị na-eche ihe kpatara eji eji obere ntakịrị pasent iji chọpụta pip, nke a bụ etu esi azụ ahịa azụmaahịa.
See hụla, na ihe atụ azụmaahịa anyị nyere ugbu a, anyị egosipụtala ọnụahịa anyị site na mkpụrụ ntụpọ abụọ (dịka 1.40, 1.35, wdg). Agbanyeghị, azụmaahịa azụmaahịa dabere na mmegharị ọnụahịa pere mpe, nke pụtara na ọtụtụ ụzọ abụọ na-aga elekere anọ.
O nwere ike bụrụ na ọ kacha mma ka anyị leba anya na ngwa ngwa nke otu pips si arụ ọrụ.
Ihe Nlereanya nke Pips na Forex
Ka anyị kwuo na anyị na-ere euro maka dollar US, yabụ anyị ga-ahọrọ ụzọ abụọ EUR / USD. Anyị kwenyere na EUR ga-abawanye na uru megide USD, yabụ anyị kwesịrị itinye usoro ịzụta.
Anyị na-etinye iwu ịzụta na EUR / USD na 1.2050
Dịka ị pụrụ ịhụ, EUR / USD na-aga 4 ntụpọ
Dị ka ọ dị, oge ọ bụla akara ikpeazụ nke 1 na-agagharị, nke ahụ ga-egosi 1 pip.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na EUR / USD si na 1.2050 gaa 1.2053, nke ahụ ga-anọchite pipụ 3.
Ihe Nlereanya nke Gbasaa Iji Pips
Yabụ ugbu a ị matara ihe mgbasa na pipụ bụ, anyị nwere ike ịnye gị ezigbo ihe atụ ụwa. Iji mee ka ihe dị mfe, ka anyị rapara na EUR / USD.
Ka anyị na-azụ ahịa EUR / USD, usoro ịzụta ga-egosi na anyị chere na EUR ga-abawanye na ọnụahịa karịa USD.
N'otu aka ahụ, ire ere ga-apụta na anyị chere na USD ga-abawanye na ọnụahịa karịrị EUR.
Tupu anyị etinye ahia anyị, anyị kwesịrị ịgbakọ mgbasa.
Ọnụahịa ịzụta bụ 0.1590, na ọnụahịa ire ya bụ 0.1600.
Nke a ga - egosi ọdịiche nke 0.0010
Dị ka ọ dị, mgbasa ahụ bụ 10 pips.
Dị ka ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-enye pips naanị 0.7 na EUR / USD, nke a dị oke ọnụ!
Itinye Leverage Mgbe Forex Trading
Yabụ ugbu a ị nwere nghọta siri ike banyere otu esi azụ ahịa azụmaahịa ga-arụ ọrụ na omume, yana nghọta nke mgbasa na pips, anyị ga-enyocha ihe ọhụụ. Na a nutshell, leverage-enye gị ohere ahia na ihe karịrị ị nwere na akaụntụ gị. Are na-agbazinye ego na azụmaahịa azụmaahịa iji bulie oke akụkụ gị.
N'otu aka, nke a nwere ike ibute nnukwu uru ma ọ bụrụ na azụmaahịa na-akwado gị. Agbanyeghị, ọ nwekwara ike ịkpata nnukwu mfu ma ọ bụrụ na nke ọzọ emee. Dị ka ndị dị otú a, ị kwesịrị ịkpachara anya mgbe ị na-etinye ihe ịzụ ahịa gị. N'ezie, ọ gwụla ma inwere nghọta siri ike banyere otu ị ga - esi guzobe nkwụsị na azụmaahịa gị, ị kwesịrị izere itinye ego n'ozuzu ya.
Tupu anyị kọwaa ego ole ị ga - enwe ike itinye mgbe ị na - azụ ahịa azụmaahịa, ka anyị lelee ngwa ngwa ngwa ahịa azụmaahịa.
Ihe Nlereanya nke Iji Leverage na Forex Trading
Ka anyị kwuo na anyị na-ere GBP / USD. Iji mee ka ihe dị mfe, anyị ga-ekwu na ọnụego mgbanwe ugbu a bụ 1.50.
Obi siri anyị ike na ọnụahịa ọdịnihu nke GBP, yabụ anyị kpebiri itinye usoro ịzụta.
Mkpokọta osisi anyị ruru £ 250.
Ka anyị na-etinye ihe leverage na 10: 1, anyị na-azụ ahịa nke ọma na £ 2,500, n'agbanyeghị na anyị na-etinye £ 250 dị ka oke.
N'ime ụbọchị, GBP na-abawanye site na 2%.
Na ahia nke £ 250, nke ahụ ruru uru nke £ 5.
Agbanyeghị, ka anyị na-etinye leverage nke 10: 1, uru anyị na-abawanye na £ 50 (£ 5 x 10)
Ihe ize ndụ nke itinye ego
Dika ahia ahia ahia nwere ike ibu uru gi, ihe egwu di na elu. Nke a bụ n'ihi na enwere ike ịbawanye ọghọm gị - na ngwa ngwa. Mgbe anyị tinyere azụmaahịa dị nro, a chọrọ ka anyị nwee oke. N'ihe atụ dị n'elu, nke a bụ 10% nke ngụkọta azụmaahịa niile, dịka ntinye nha bụ 10: 1. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na leverage ahụ bụ 25: 1, azụmahịa ,25,000 1,000 ga-achọ £ XNUMX na oke.
Rịba ama: Ihe ize ndụ nke ịzụ ahịa na ntinye ego nwere ike ibelata nke ukwuu mgbe ị wụnye nkwụsị-ezi uche.
Ọ bụrụ na azụmahịa gị mechara megide gị, ị na-eguzo n'ihe ize ndụ nke ịhapụ oke gị n'ozuzu ya. Nke a ga - eme ma ọ bụrụ na ahịa gị zutere ihe nfu nke ruru ego oke. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na oke gị dị 20% (20: 1 leverage), yana uru nke iwu gị jụrụ 20% na ahịa ahịa, mgbe ahụ ị ga-atụfu oke gị.
Nkwụnye ego Forex
Ọ bụrụ na ị dabere na UK ma si otú a - na-eji onye na-ere ahịa azụmaahịa nke njikwa njikwa ego na-achịkwa (FCA), mgbe ahụ ahia n'ịntanetị ikpo okwu ga-ekwenye na ikike itinye ego nke European Securities and Markets Authority (ESMA) nke enyere.
Nke a na - eme ka 30: 1 dị elu, ma 20: 1 na - arụ ọrụ abụọ.
Ego ahia ahia Forex
Iji nwee ike ịzụ ahịa na ntanetị n'ịntanetị, ị ga-eji onye na-ere ahịa n'ịntanetị. A na-akpọkwa ya dị ka ikpo okwu ahia, ndị na-ere ahịa ga-akwụ gị ụgwọ iji jiri ọrụ ha. Ego a kapịrị ọnụ ga-adị iche na onye na-ere ahịa na onye na-ere ahịa, n'agbanyeghị na ha na-agụnye otu n'ime ndị na-esonụ.
N'adịghị ka CFDs, ọ bụ ihe niile-ma-ụfọdụ na onye na-ere ahịa gị ga-akwụ gị ụgwọ ọrụ maka azụmaahịa azụmaahịa. Nke a na-esitekarị nha ahia gị, ma gbakọọ dị ka pasent.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ọrụ ahụ bụ 0.5%, yana uru azụmaahịa gị bụ £ 1,500. Nke a ga - apụta na ị ga - akwụ £ 7.50 iji mepee azụmaahịa ahụ, wee ghaa n'ihu 0.5% mgbe ị kpebiri imechi ya.
Agbanyeghi na anyi ekwurula uzo etu mgbasa a si arụ ọrụ, odi nkpa ịmara na nke a bụ ego ọzọ achọrọ ka a tụlee. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-ere ahịa EUR / USD, na mgbasa ahụ bụ 2 pips. Ọ bụrụ na itinye iwu ịzụta, ọnụahịa nke EUR / USD ga-achọ ịrịgo site na pipụ 2 naanị iji mebie.
Dị ka ndị dị otú a, mgbe ịzụrụ ihe ịzụta gị na mbụ, ị ga-abụ 2 pips ala. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị debere ire ere ma gbasaa bụ 2 pips, mgbe ahụ ị ga-achọ ọnụahịa nke EUR / USD iji gbadaa site na 2 pips naanị iji mebie.
🥇 Opekempe Commission
Agbanyeghị na ọrụ dị n'okpuru nke ebubo site na ọnụego azụmaahịa azụmaahịa nwere ike ịpụta dị ka asọmpi, ụfọdụ nyiwe ga-achọ ọrụ opekempe kwa ọnwa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọrụ kacha nta kwa ọnwa bụ $ 10, mana ị na-akwụ $ 7 naanị n'ime ọnwa ahụ, ị ​​ga-akwụ ụgwọ $ 3 ọzọ iji kpuchie ụkọ.
Fe Ego cingkwụ N'abalị
Ọ bụrụ na ị kpebie itinye ego gị na azụmaahịa gị, ma ị na-emeghe ọnọdụ ahụ n'abalị, ị ga-akwụ ụgwọ ego. Nke a adịghị iche na ịgbaziri ego site na nnukwu ụlọ akụ n'okporo ámá, ebe ị ga-akwụ ụgwọ ọmụrụ nwa na ego nke onye na-ere ahịa na-agbazinye gị.
Nke a bụ ihe kpatara na ndị ahịa anaghị adịkarị njikere idobe ọnọdụ ndị akwụ ụgwọ n'abalị, ọ bụghị opekata mpe n'ihi na mmasị ahụ na-eme ka azụmahịa ahụ ghara ịdịghachi.
Ikwesiri iche echiche banyere ego nkwụnye ego na ego ịkwụsị. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ndị na-ere ahịa niile na-ana ha ego, ụfọdụ na-eme ha.
Kedu otu esi ahọrọ usoro ahia ahia Forex?
N’ezie, enweghi ụkọ nke ndị na-ere ahịa azụmaahịa na-arụ ọrụ na oghere ahịa UK. Site na nke ahụ, ịchọrọ ịchọta ikpo okwu dabara maka mkpa gị.
N'okpuru ebe a, anyị akụdala ụfọdụ isi ihe ị ga - achọ ile anya maka mgbe ị na - ahọrọ usoro ịzụ ahịa azụmaahịa.
Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa azụmaahịa chọrọ ịnabata ndị ahịa si UK, ndị FCA ga-achịkwa ya. Ọ bụrụ na anaghị ejide ikikere FCA, zere onye na-ere ahịa na ụgwọ niile.
Chee echiche banyere usoro ịkwụ ụgwọ nke ịchọrọ itinye ego. Imirikiti ndị na-ere ahịa na-anabata nnyefe ego na debit / kaadị akwụmụgwọ, ebe ndị ọzọ na-akwado e-wallets
Nyochaa usoro ego nke onye na-azụ ahịa ị họọrọ. Ọ bụrụ na ndị na-ere ahia ebubo ọrụ, chọpụta ego ole nke a bụ, yana ma enwere ego opekata mpe kwa ọnwa.
N’otu ụdị dị ka ụgwọ azụmaahịa, ikwesiri ịchọpụta ụdị ịgbasa ụgwọ azụmaahịa azụmaahịa ahụ. Fọdụ n'ime ndị na-ere ahịa asọmpi kachasị asọmpi na oghere na-akwụ naanị 0.7 pips na isi ụzọ abụọ.
Ọnụ ọgụgụ nke Forex ụzọ abụọ
Wepụta oge na-agagharị na mpaghara ahia nke onye na-ere ahịa iji chọpụta ọnụọgụ abụọ ọ na-edepụta. Anyị na-ahọrọ ndị na-ere ahịa na-ekpuchi ọtụtụ ndị isi na ụmụntakịrị, yana ọtụtụ ezigbo exotics.
Ngwa ahia na nyocha
Ọ bụrụ na ị na-achọ inwe ihe ịga nke ọma na ọrụ azụmaahịa gị, ọ dị oke mkpa ka ị mụta otu esi eji akara aka. Nke a ga - enyere gị aka nyochaa usoro ọnụahịa nke akụkọ ihe mere eme nke ụzọ ị họọrọ, wee chọpụta etu ahịa ga - esi gaa ọzọ.
Ngwongwo ahia ahia kacha mma 2021
Oge adighi ichoputa onye ahia gi? Gbalia inyocha uzo ahia mbu nke anyi kwadoro n’okpuru.
1. eToro - Best Forex Trading Platform maka Beginners
Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido zuru oke n'ụwa nke azụmaahịa azụmaahịa, anyị ga-atụ aro ịlele eToro. Usoro mmeghe akaụntụ na-ewe nkeji, ma ị nwere ike itinye ego na kaadị debit / kaadị, nnyefe ụlọ akụ, ma ọ bụ obere akpa. Enweghị ọrụ mgbe ị na-azụ ahịa Forex na eToro, n'ihi ya, naanị ịkwesịrị ịtụle mgbasa.
Ọ bụrụ nị wepụta oge iji gụọ ntuziaka anyị na Forex Trading for Beginners, ị kwesịrị ịmara ugbu a otu ụlọ ọrụ si arụ ọrụ. Anyị akọwaala ihe niile site na ịzụta na ire iwu, mgbasa, pips, leverage, na nke dị oke mkpa - ihe egwu dị n'ịzụ ahịa n'ịntanetị.
Anyị akọwapụtakwala ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịlebanye anya tupu ịhọrọ ọhụụ azụmaahịa ọhụụ. Nke a na - enye gị ohere ịme nyocha nke gị n’elu ikpo okwu tupu imepe akaụntụ. Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji mee nke a, anyị ewebatala ihe mbụ anyị na-eweta maka ịzụ ahịa maka Forex maka 3.
N'ikpeazụ, dị nnọọ ijide n'aka na ị na-etinye iwu nkwụsị-ezi uche mgbe niile mgbe ị na-azụ ahịa azụmaahịa - ọkachasị ma ọ bụrụ na itinye ntinye akwụkwọ N'ime nke a, ị ga-ejedebe oke ego ị tufuru site na azụmaahịa na-aga nke ọma.
Kedu ka m ga-esi tinye ego na azụmaahịa azụmaahịa Forex?
Imirikiti ndị na-ere ahịa azụmaahịa na-akwado nnyefe ego ụlọ akụ na kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ. Fọdụ ga-akwadokwa e-wallets dị ka PayPal.
Kedu ụzọ kachasị mma iji mụta azụmaahịa azụmaahịa?
Internetntanetị juputara na ozi n'efu na otu esi azụ ahịa Forex. Site na itinye oge achọrọ iji nyochaa akụkụ ọ bụla iji kwado ya, ị ga-enwe ohere kachasị mma ịme ego n'oge na-adịghị anya. Na nke ahụ kwuru, ọ dịkwa mma ịtụle usoro azụmaahịa Forex ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ngwa ngwa-usoro mmụta.
Kedu ihe nkwụnye ego pere mpe nke achọrọ na azụmaahịa azụmaahịa?
Ikwesiri ịkwụnye ma ọ dịkarịa ala £ 100 iji malite na onye na-ere ahịa na mbụ.
Ndị na-ere ahịa azụmaahịa dị n'ịntanetị dị mma?
Ọ bụrụ na onye na-azụ ahịa azụmaahịa ị họọrọ na-eje ozi na ndị ahịa UK, mgbe ahụ FCA ga-achịkwa ya. Nke a kwesịkwara ịbịaru atụmatụ nchebe nke ihe ruru £ 50,000 ma ọ bụrụ na onye na-ere ahịa enweghị ego.
Kedu ihe bụ ahia Forex kachasị ahịa?
Zọ ahia kachasị ahịa ugbu a bụ EUR / USD, nke a na-akpọ 'Fiber'.
Ego ole ka m nwere ike itinye na isi ụzọ abụọ Forex?
Y’oburu na ibu onye ahia ahia nke di na UK, ogha n’abu ogha n’iru 30: 1 n’elu isi abuo. Agbanyeghị, ọ bụrụ na-ewere gị dị ka onye na-azụ ahịa ọkachamara, ịnwere ike ị ruru 500: 1.
Kedu ka m ga-esi nweta uru azụmaahịa azụmaahịa m?
Dị ka iwu na-akwadoghị ego na-agbanyeghị ego, ị ga-ewepu usoro azụmaahịa azụmaahịa gị na otu usoro ị jiri mee nkwụnye ego.